हार्दिकताको प्रभाव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २८, २०७४ डा. बच्चुकैलाश कैनी
हामीले कतिपय समय र अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यसेवाग्राहीलाई रुखो वचन बोलेको, आदर नगरेको, राम्रोसँग रोगको परीक्षण, पहिचान, निदान र उपचारबारे नबताएको गुनासा सुन्दै आएका छौं ।
त्यस्तैगरी स्वास्थ्यसेवाग्राहीले स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति अभद्र व्यवहार गरेको, अनादरको साथै अविश्वास गरेको कुरा सुन्दै र भोग्दै आएका छौं ।
स्वास्थ्यसेवा एकदम संवेदनशील क्षेत्र हो । स्वास्थ्य मानिसको भौतिक स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थामात्रै हैन, यो अरू धेरै कुरा जस्तै– आर्थिक अवस्था, पारिवारिक सम्बन्ध, रोजगारी, सामाजिक र अन्य कुरासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । स्वास्थ्यसेवा बालक, युवा, वृद्ध लगायत सबैले त्यत्तिकै रूपमा उपयोग गरेका हुन्छन् । स्वास्थ्य सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हामी सबै स्वास्थ्यसेवा प्रयोगकर्ता भएको नाताले स्वास्थ्यसेवामा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा उपभोगकर्तालाई कस्तो व्यवहार गर्छन्, निकै अर्थपूर्ण हुन्छ ।
स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवा उपभोगकर्ताको बीचमा अलिखित सम्झौता र सम्बन्ध हुन्छ । जस अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो योग्यता र दक्षताको भरमग्दुर प्रयोग गरी सकेसम्म स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु र स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्ताले स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वास गरी आपसी समझदारीको वातावरण खडा गराउनुपर्ने हुन्छ । यो सम्झौता हरेक सेवामा उत्तिकै रूपमा लागू हुन्छ । तर यो सम्बन्धको परीक्षण भने स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्ता वा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कुनै एक वा दुवै पक्षलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दा हुन्छ । यो पनि धेरैजसो कसको व्यवहार कति नम्र र को कति हार्दिक छ भन्ने कुरामा समेत परीक्षण हुन्छ ।
स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्ताले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको बारेमा जानकारी पाउनु उसको अधिकार हो । त्यसैले यो कुराको सुरुवात स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्तालाई स्वास्थ्यकर्मीले भेट्ने बित्तिकै आफ्नो नाम र पदको परिचय दिएर सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्ताको नाम र विवरण मेडिकल वा नर्सिङ कागजमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्ताको परिचय स्वास्थ्यकर्मीले पहिले नै पाएको हुन्छ । तर हरेक स्वास्थ्यसेवा उपभोगकर्ताले आफूले भेट्ने स्वास्थ्यकर्मीको परिचय पाएको नहुन सक्छ । आफ्नो परिचय दिने पालो, संवादको सुरुवात गर्ने पालो र हार्दिक वातावरण बनाउने कुराको सुरुवात स्वास्थ्यकर्मीले नै गर्नुपर्छ ।
नम्र व्यवहारको अपेक्षा कसले पो गर्दैन र ? सेवाग्राहीले हरेक सेवा कार्यालयमा नम्र व्यवहार र हार्दिकताको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । स्वास्थ्यसेवा उपयोग गर्ने मानिस कुनै न कुनै शारीरिक वा मानसिक रोग वा पीडाबाट गुज्रेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूप्रति स्वास्थ्यकर्मीमात्रै हैन, परिवारका सदस्य, आफन्त र अरू सबैले नम्र व्यवहार गर्नुपर्छ ।
भनिन्छ, नम्र र भद्र व्यवहारले कतिपय मानसिक र शारीरिक पीडाबाट मुक्ति दिन्छ । साथै एकआपसमा विश्वास र सद्भावको वातावरण सिर्जना गर्छ । त्यसैले स्वास्थ्यसेवाका सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीहरूले दुवै पक्षको हितका लागि मिठो बोल्ने, नम्र हुने र हार्दिकता देखाउनु जरुरी छ ।
नम्र व्यवहार र हार्दिकताको अपेक्षा कदापि एकातर्फी हुनसक्दैन । स्वास्थ्यसेवाका सेवाग्राहीले आफूलाई सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई सम्मान, आदर र विश्वास गर्नु उत्तिकै जरुरत हुन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने कुनै कार्य आफैमा महान कार्य हो । यो जति ठूलो समाजसेवा र मानवसेवा अरू हुनसक्दैन । यो अवसर सबैजसो स्वास्थ्यकर्मीलाई मिल्नु स्वयं उनीहरूका लागि गर्वको कुरा हो । यस्तो महान कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले नमिठो बोलेको, अरू कसैलाई होच्याएर बोलेको वा कसैसँग अभद्र व्यवहार गरेको त्यसै पनि सुहाउने काम हैन । त्यस्तै दिनरात नभनी हरेक समय र हरेक स्वास्थ्यसेवाग्राहीको दु:ख र पीडामा मल्हम लगाउने र मानवसेवामा समर्पित त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीप्रति नमिठो बोल्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, अनावश्यक रूपमा शंका एवं उपशंका गर्नु र आक्रोश पोख्नु कदापि नैतिक र व्यावसायिक रूपमा उचित हैन ।
हरेक सेवाको प्रभावकारिता र दक्षता नाप्ने आफ्नै सूचकांक हुन्छन् । सेवा उपलब्ध हुने काममा प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने सेवाग्राही कति खुसी भए, सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाए, सेवाग्राहीको समस्या के कसरी समाधान भए आदि कुरा नै मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवाको प्रभावकारिताको कुरा गर्दा सेवाग्राहीहरूको रोगको परीक्षण, पहिचान र उपचारको विभिन्न पक्षका साथसाथै उनीहरूको सन्तुष्टिको मात्रा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्यसेवामा सेवाग्राहीले स्वास्थ्यकर्मीको बोलीचाली, व्यवहार र नम्रताको मापन गर्छन् । स्वास्थ्यकर्मीको सम्बन्धित विषयको दक्षताका साथसाथै उनीहरूको बोलीचाली, व्यवहार र नम्रताको मापनको आधारमा सेवाग्राहीले कुन स्वास्थ्यकार्मी कति राम्रो वा नराम्रो भन्ने मूल्यांकन गर्छन् । त्यसैले हरेक स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो विषयमा दक्षता हासिल गरेर मात्रै हुँदैन । उनीहरूले कसरी सञ्चारको प्रयोग गर्ने, जनसम्पर्क कसरी गर्ने, विवादको बेला कसरी प्रस्तुत हुने वा विवाद समाधान गर्ने, कसरी सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने आदिजस्ता ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ ।
हँसिलो हुनु, सकारात्मक सोच्नु र अरूको प्रशंसा गर्नु एउटा कला हो, जुन स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीमात्रै हैन, सबैका लागि नितान्त जरुरी हुन्छ । हाँस्नु र हँसाउनु यस्तो कुरा हो, जुन सित्तैमा पाइन्छ र जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ । सेवा दिने बेला जति यसको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यत्तिकै सेवाग्राही र उनीहरूको परिवारको पीडामा संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीमा सेवाग्राहीको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने, पीडामा सहानुभूति दिने र दु:ख परेको बेला वातावरण सम्हाल्न सक्ने कला, सीप, योग्यता र दक्षता हुनुपर्छ । जसले गर्दा सेवाग्राही र उनीहरूका आफन्त स्वास्थ्याकर्मीको भरोसा र विश्वास गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीहरूको बीचमा हुने धेरैजसो विवाद बोलीवचन, सञ्चार र सानोतिनो असमझदारीको कारणले नै हुन्छन् । त्यस्ता विवाद र असमझदारी हटाउन स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना र स्वास्थ्यसेवाको समस्या जस्तै– ढिलासुस्ती, चिकित्सकीय जटिलता, स्रोत र साधन आदि इमानदार र पारदर्शी रूपमा सेवाग्राहीलाई भन्नुपर्छ । साथसाथै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीले त्यस्ता समस्याबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा त्यस्ता कुरा नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्रै दुवै पक्षबीच समझदारी र विश्वास बढ्छ ।
मानवजाति आफैमा भावनात्मक हुन्छ । हामी बिरामी पर्दामात्रै हैन, अरू बेला पनि अरूले आफूलाई ख्याल राखेको, माया गरेको, आफूसँग मिठो बोलेको र राम्रो सम्बन्ध राखेको अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी आफू अरूबाट जस्तो व्यवहार, सम्बन्ध र बोलीचालीको अपेक्षा राख्छौं, अरूप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने सबैको भलो हुन्छ । आफू भलो त जगतै भलो ।
कैनी क्विन एलिजाबेथ अस्पताल, लन्डनमा वरिष्ठ व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत छन् ।
मिडियामा नदेखिने आदिवासी जनजाति
कार्तिक २८, २०७४ टासी टेवा डोल्पो
बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि स्थापित भयो । राज्यको विरोधमा उत्रेका आदिवासी जनजातिले आन्दोलनको क्रममा आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना गरे ।
आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै सन् २००२ मा राज्यसत्तालाई घँुडा टेकाउन सफलता पाएसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसमेत स्थापना गराइछाडे । उक्त सरकारी संस्थाको ऐनसँगै राज्यबाट पहिलोपटक नेपालमा रहेका ५९ आदिवासी जनजातिको समूहलाई सूचीकृत गराउन सफल भए । यति हुँदाहुँदै पनि अझै आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने हेयको दृष्टिकोण नेपाली राज्यमा कायमै छ ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रसँंगै जनताको भाषा बोल्ने मिडियाको संख्या र प्रभाव बढ्यो । तर राज्यको प्रशासनबाट मात्र होइन, राज्यको अभिन्न अंग मानिने सञ्चारबाट पनि आदिवासी जनजातिले विमुख भएको महसुस गरे । उक्त असमावेशिताप्रति आदिवासी जनजातिहरूको बुझाइ कस्तो छ, राज्य र मिडियाले थाहा पाउनु जरुरी छ । के आदिवासी जनजातिहरू नेपाली जनताभित्र पर्दैनन् र ? जनताको आवाज बोकेको दाबी गर्ने मिडियाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, के आदिवासी जनजातिहरू आवाजविहीन भएका छैनन् ?
राज्यको उत्पीडनको शृङखला धेरै लामो भए पनि छापामा नअटाएका आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवालको छलफल पक्कै पनि मिडियाको विकाससँगै हुनुपर्ने हो । मिडियाको विकासमा पँुजीवादी संस्कार, औद्योगीकरण र बजारतन्त्रलाई पनि छुटाउन नमिल्ला । यद्यपि विभिन्न बौद्धिक विमर्शले पनि पुँजीवादी संस्कार र औद्योगीकरणको मार विश्वमा, विशेष गरेर आदिवासी जनजातिमा परिरहेको सावित गरिसकेका छन् । वातावरण लगायत जल, जंगल र जमिनसँगको पुरानो सम्बन्ध गहिरिएर अध्ययन गर्नु भनेकै आदिवासी जनजातिको संस्कृतिको घोत्लिएर पठनपाठन गर्नु हो । बजारतन्त्रले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ । पुँजीवादी व्यवस्था र बजारतन्त्रकै अंग भएकै कारण पत्रपत्रिकामा पहिचान र संस्कृतिको सवाल र मुद्दालाई लुकाइने वा दबाइने त होइन ?
प्रत्यूष वन्त, कुमार यात्रु र भास्कर गौतमद्वारा सम्पादित ‘छापामा जनजाति’ किताब १४ खण्डमा ४० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको विषयमा लेख छापिएका छन् । यस किताबको मूल मर्म हो– राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरू उपेक्षित हँुदै आएको तितो यथार्थलाई सहर्ष स्वीकार्दै र वैकल्पिक विचारलाई स्थापित गर्दै कृत्रिम बहुलवादको भ्रमलाई पनि चिर्नु । उक्त किताब प्रकाशनपछिका डेढ दशकमा आदिवासी, जनजातिहरूको मिडियामा समावेशिता ह्वात्तै बढेकै हो त ? विशेषगरी विषयगत लेखनको मात्र छलफल गर्दा पनि देशमा प्रकाशित हुने प्रमुख पत्रपत्रिकाले आदिवासी जनजातिका विषयलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दा नेपालमा हरेक वर्ष मनाइने विश्व आदिवासी दिवसको भोलिपल्ट पत्रिका पृष्ठमा केवल एउटा फोटोमा कैद हुने दृश्यलाई कसरी बुझ्ने ? पक्कै उक्त दिवस एउटा फोटोमात्र पनि हैन । आदिवासी जनजातिहरूले विभिन्न ठाउँमा गरेका आन्दोलनका विषयगत छलफल के कस्तो भयो त भन्ने तथ्य देशका बाँकी आदिवासी जनजातिले ती पत्रपत्रिकाबाट पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन आउँछ ।
आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूले संस्थागत विभेद झेल्नुपरेको छ । सञ्चार माध्यमले आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवाललाई नसमेटेको यथार्थ रहेको छ । यसै सन्दर्भमा मिडियाका सम्पादकहरूलाई लाग्दो होला, आफ्ना पत्रपत्रिकामा किन आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नोबारे लेख्दैनन् ? के आदिवासी जनजातिले साँच्चिकै आफ्नो सवालमा पत्रपत्रिकामा नलेखेकै हो त ? या ती सवाल कुनै न कुनै निहुँमा पत्रपत्रिकाहरूमा समावेश नगरिएका हुन् ? आदिवासी जनजातिले पत्रपत्रिकाको लागि लेख्दै लेखेनन् भन्नुअघि केही तथ्य थाहा पाउन जरुरी छ ।
सन् २०११ को जनगणनाको विधिबारे आदिवासी जनजातिकै विशेषज्ञबाट आलोचना भए तापनि कुल जनसंख्याको ३५.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको पुष्टि भइसकेको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै पनि आफ्ना छुट्टै मातृभाषा छन्, जुन मिडियाको भाषा होइन । स्कुलको पाठ्यक्रममा घोकन्ते शैलीमा पढाइने नेपाली भाषा पक्कै पनि आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषा हैन । आम रूपमा नेपाली भाषा नै मिडियाको भाषा भएको छ । यो कुरा भनिराख्न किन जरुरी छ भने नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकामा छापिन नेपाली भाषामा पोख्त हुनु र लेख्न सक्नुपर्छ । यसले गर्दा कुनै आदिवासी जनजातिका समुदायका लेखकहरूले कनिकनि नेपालीमा लेख्ने कोसिस गरिहाले पनि उनीहरूका रचना छापिन निकै गाह्रो हुन्छ । कैयौं पटक त नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जानकार महेन्द्र लावतीले नेपाली भाषामा लेखेका लेखसमेत अनेक काँटछाँटपछि मात्रै छापिने गरेको तथ्य लावती आफैंले बेला–बेलामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसो भन्नुको मतलब आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा नभई अरूको भाषामा लेख्दासमेत यहाँ सुख छैन । त्यसैले पनि देशका झन्डै ७५ जिल्लामा पुग्नसक्ने क्षमता भएका पत्रपत्रिकाले आदिवासी जनजातिका यस्ता समस्यालाई पनि मनन गर्नुपर्छ ।
अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र भौगोलिक सवाल बोकेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन प्रस्फुटित हुनुको कारण हो, राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको पहुँच नपुग्नु । उत्पीडनको ‘डिस्कोर्स’ र अनुभव त्यहींबाट ज्वलन्त भएर आएको हो । तिनै ‘डिस्कोर्स’ र अनुभव नेपाली मिडियामा अभिव्यक्त भएमा जनदबाब सिर्जना हुन्छ र राज्यले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पत्रपत्रिकाहरूमा आदिवासी जनजातिका सवाल र त्यहाँ उनीहरूको पहुँच महत्त्वपूर्ण छ । यससँगै नेपालको मिडियामा अन्य उत्पीडित समुदायसँगै आदिवासी जनजातिको पहँुच, समावेशीकरणको विषय गहन हुन आउँछ ।
यसो भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्छ : नेपालका प्रमुख मिडियामा कतिजना आदिवासी जनजाति होलान् ? अलिअलि भएका आदिवासी जनजातिहरू पनि कुन ओहदामा छन् ? यी प्रश्न पनि गम्भीर हुन आउँछ । सम्पादककै पदमा भएकाले त स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाउन मुस्किल भएको अवस्थामा सम्पादकभन्दा तल रहेका जनजातिहरूले स्वतन्त्र हिसाबले लेख्न पाउँलान् त भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ ।